🏝 I-Sandy Hooked 🪝 Pine Cottage ngasecaleni kweLake Pier Beach - I-Airbnb
🏝 I-Sandy Hooked 🪝 Pine Cottage ngasecaleni kweLake Pier Beach
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMathew
* * * okwangoku akukho intanethi/intambo/ukubukela kwi-intanethi. Inkonzo yeselfowuni ye-Lte/yezindlu iyasebenza ngaphakathi endlini. Silindele ukufumaneka kweValley Fylvania ehlotyeni kwi-intanethi. Abanye ababoneleli ngeintanethi abafumaneki kule dilesi. Injongo yethu kukuhlola iinkwenkwezi ezintlanu ngoko nceda ubhukishe kuphela ukuba uvakalelwa kukuba akuzukuchaphazela ukuhlala kwakho.
Dlulela esitratweni usuka eSandy Hook Pier edumileyo kunye nolwandle kwiLake Winnipeg. Ilungele iholide, iintsuku zaselwandle, ukuloba emkhenkceni, kunye nokuzikhupha kwabantu abathandanayo!
Ukuloba emkhenkceni, ukuloba ehlotyeni, ukuqubha, igalufa ekufutshane! Vula ingcamango yegumbi lokuhlala kunye nekhitshi, isiqithi esikhulu sokuvala isilarha kunye neetafile kunye nekofi, iibhedi ezimbini ezinkulu, umatshini wokuhlamba izitya onokuhamba nawo, isitovu segesi, indawo yokubasa umlilo, iikhabhathi kumagumbi okulala, iifestile ezintsha, ii-shingles ezintsha, ii-Pine kuyo yonke, iidesika ezi-2 kunye nomngxuma womlilo.
Ikhitshi linezinto zokupheka ezibalulekileyo, umatshini wokwenza ikofu, iketile, i-toaster neoveni yomatshini wokubhaka.
Izinto zokuthambisa, isepha nezinto zokucoca ezisisiseko ziyafumaneka. Iindwendwe ziyakwazi ukungena kwindawo yokuhlamba iimpahla kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle!
Iitawuli nezinto zebhedi ezinikezelwa ngumbuki zindwendwe.
Kufuphi ne-100 i-Blu-Ray/ii-DVD kunye nengqokelela yeencwadi ezinokukunceda uphole.
Nceda uphathe ukutya kwakho kunye nezinto zeshawa.
Ii-blinds zifakiwe ukususela kwiifoto ezithathiweyo (ukuba kuyenzeka ungumlandeli wokulala e)!
Njengoko sisebenzisa inkqubo yemvelo, iindwendwe zikhuthazwa ukuba zize namanzi azo okusela. Umxholo ophezulu wamachibi emanzini udla ngokubonelela ngokubonakala kwamanzi anemibalabala kunye nokungcamla intsimbi.
- I-Sandy Hook pier kunye nolwandle oludumileyo kwiLake Winnipeg ngaphaya nje kwesitrato!
- Ephakathi kweGimli neWinnipeg Beach, iSandy Hook ikunika indawo yokuhlala entle ekhoyo kwiInterlake!
- iSandy Hook Golf Club ekufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Mathew
Ukuncokola kubalulekile! Ndifumaneka ngokuthumela imiyalezo kwi-app okanye ukufowunelwa xa kukho iimeko zongxamiseko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sandy Hook